रेखा र झरना पछि खै त नायिका ? ~ The Nepal Romania
3:18 AM बिबिध No comments
‘यो सिनेमाले मेरो चलचित्र करिअरलाई धेरै माथि उकास्ने आशा गरेको छु’ अधिकांश नायिकाहरु सिनेमा चल्ने बेलामा यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर सिनेमा चलिसकेपछि उनीहरुको खासै चर्चा हँुदैन । नेपाली सिनेमा बजारमा अहिले नायिकाको अभाव चरम रुपमा देखिन थालेको छ ।अहिले मुलधारका सिनेमामा चलेका भनिएका रेखा थापा र झरना थापापछिको विकल्प को हो त ? कसैको पनि नाम लिन सकिने अवस्था छैन । नेपाली सिनेमामा नायिकाहरुको आवश्यकतालाई पुर्ति गर्दै आएका झरना र रेखा दुवै विवाहित हुन् । यसैले पनि यिनीहरुले अब लामो समयसम्म यो बजारलाई धान्न सक्छन् भन्ने देखिदैन । यो कुरा विगतका नायिकाको उदाहरणले पनि देखाएको छ ।
विश्वको जुनसुकै सिनेमा क्षेत्रमा पनि नायिकाहरुले लामो समयसम्म बर्चस्व कायम गर्न सकेको देखिँदैन । यि बाहेक अन्य थुप्रै नायिकाहरु आज छन् त भोलि छैनन् जस्तै बनेका छन् ।
नायिका केकी अधिकारी, नम्रता श्रेष्ठ, ऋचा शर्मा, नम्रता श्रेष्ठले पनि कुनै कमाल मच्चाएका छैनन् । केही आशा गरिएकी झरना बज्राचार्यले पनि खासै केही गर्न सकिनन् । नयाँ आएका नायिकाहरु काम भन्दा गफ नै धेरै दिने खालका छन् । केही सिनेमा नै खेल्न पाएका छैनन् । नायिकाहरुमा बढ्दोे घमण्डले उनीहरुलाई लामो समयसम्म सिनेमा क्षेत्रमा टिक्न दिएको छैन ।
सुमिना घिमिरे, जिया के.सी, जेनिशा के.सी जस्ता नायिकाहरु खासै बिक्न सकेका छैनन् । कुनै न कुनै निर्देशकसँग निरन्तर नाम जोडिने भएकाले पनि यि नायिकाहरु फिल्मी क्षेत्रका नायिका भन्दा पनि क्याम्पका नायिकाका रुपमा सीमित छन् । यसकारण, पनि यिनीहरुलाई लामो रेसको घोडाको रुपमा हेर्न सकिएको छैन । सबैजना फरकधारको सिनेमा भनेर कराईरहेका छन् । तर कसैले पनि कुनै सिनेमामा काम गरेर तारिफयोग्य प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यसैले नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा रेखा र झरना पछिको बिकल्प देखिएको छैन ।
जस्तो कि करिश्माको बर्चस्व रहेको समयमा निरुताको आगमन भयो । जहाँ उनी लामो रेसको घोडा देखिईन् र चलिन् पनि । यसपछि निरुता चल्दा चल्दै नायिका रेखा थापाको सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश भयो र उनी चलिन् पनि । तर १० वर्षसम्म रेखा निरन्तर चल्दा पनि अर्को बिकल्पको रुपमा नायिका आउन सकेको पाइर्ंदैन । यसकारण रेखा थापा र झरना थापापछि को नायिका हुन् भनेर सोच्न सक्ने अवस्था आएको छैन । आखिर को होला त यि दुईपछिको बिकल्प नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा ?